यो भनिएको छ कि मिठाई कुकीस सॉसेज तयार गर्न सजिलो छ, र यसको स्वाद मिठाइहरु, विशेषकर बच्चाहरु को प्रेमिका द्वारा सराहना गरिनेछ।
यसलाई पकाउनुको लागी तपाईंलाई कुकी चाहिन्छ (लगभग 200 ग्राम)। यो कुनै पनि प्रकार लिन सकिन्छ, यो राम्रो छ भने यसमा fillers वा additives समावेश छैन। एक राम्रो विकल्प एक छोटो वा क्रीमले नरम बिस्कुट हुन सक्छ जुन राम्रो अवशोषित हुन्छ। यसको अतिरिक्त, तपाईंलाई मक्खन को एक पैच,4चम्मच चीनी को, एक कोष पाउडर, दूध को गिलास को एक चौथाई, खुबै अखरोट को आवश्यकता हो। कुकीज एक गहिरो कटोरामा राखिएको छ, जहाँ यो कुचल हुन्छ, तथापि, यो मिठाई पेस्ट्री सॉसेज वास्तविक जस्तो देख्न केहि ठूला टुक्राहरू छोड्न लायक छ। एक अलग कंटेनर मा, चीनी र कोकोआ मिश्रित हुन्छ। मक्खन एक सानो आगोमा पिघेको छ, चीनी र कोकोआमा सजिलै पोलिएको छ, र दूध थपिएको छ। केहि मिनेट चकलेट मिश्रण आगोमा रहेको छ, पछि हटाइयो र थोडा ठंडा। पागलको कर्नेल काटिएका छैनन् पनि कुकुरहरू, कुकीहरूसँग मिल्दो छ, उज्यालो यहाँ खसेको छ। सबै चीज सावधानीपूर्वक घुटिएको छ, केही मिनेटको लागि छोटो छोडिन्छ। त्यस पछि, सामूहिक पन्नीमा राखिएको छ, साउसेजको आकार ढाँचामा छ र फ्रीजरमा आधा घण्टाको लागि राखिएको छ। मिठाईको सेवा गर्नु अघि, पन्नी हटाइएको छ, र शीर्ष उत्पादन कटा पागल संग छिटो छ।
कुकीजबाट कसरी सोजी बनाउने भन्ने बारे कुरा गर्दै, कन्डिसन दूधको साथ नुस्खाको बारेमा बिर्सनुहोस्। यो मिठाई बनाउन यो विधिको लागि तपाईंलाई कन्डिसन दूधको आधा टुक्रा, 100 ग्राम मक्खन, आधा किलो किलोग्राम, कोको र अखरोटका केही चम्मच चाहिन्छ। नट मध्यम आकारका टुक्राहरूमा काटिएका छन् , तेललाई जोडेर नचाहिने प्यानमा सुकेको। कुकी कुकुरहरू, यसले कन्डेन्डेड दूध, नट, पिघलिएको वा नरम मक्खन र कोको बोल्छ। मिश्रण राम्रो तरिकाले मिश्रित छ, इच्छित आकार दिइएको पालीथाइलन फिल्म वा पन्जालमा राख्नुहोस्, र त्यसपछि फ्रिजमा पूर्ण रूपमा ठोस नभएसम्म पठाइयो। कन्डेन्डेड दूधको साथ परिणामस्वरूप चकलेट साउसेजले चायलाई त्रसित पार्छ, स्लाइसमा काटिन्छ।
निम्न क्यालोरीले निम्न नुस्खाको अनुसार पकाएको मिठाई कुकीस सुसेज समावेश गर्दछ। प्यानमा, 500 ग्राम खट्टा क्रीम, एक गिलास र चीनी र कोकोआ3चप्पलेट मिश्रण गर्नुहोस्। केहि मिनेट चकलेट प्रतीक सानो आगोमा भरिन्छ। एक थोडा ठंडा मिश्रण एक किलोग्राम कटा कुकीहरू राखिएको छ। यो ध्यान दिनु पर्छ कि यस तरिका मा तैयार उत्पादन को स्वाद धेरै सज्जन हुनेछ।
चिसो चकलेट पनि मिश्रणमा थप्न सकिन्छ। यो गर्न, चकलेट को धेरै साना टुक्राहरु मा एक saucepan मा राखिन्छ, एक जोडा spoonfuls को फैटी दूध या क्रीम जोडयो। केही मिनेटमा मिश्रणले आगोमा राखिएको छ जबसम्म चकलेट पूर्ण रूपमा भंग हुन्छ। तपाईं कोकोआको सट्टा मिश्रण प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, कुकुर कुकिलो कुकुरहरू थप्नु, जसले कन्डिसन दूध, नरम मक्खन, अनुहार पनि राख्छ। मिठाई फ्रिजमा भण्डारण गरिएको छ। तपाइँ टेबलमा सेवा गर्नु अघि, तपाईंलाई निश्चित गर्न को लागी कि मिश्रण पुरा तरिकाले जमेको छ। धेरै मोटो सासेज लामो समयसम्म तयार नहुन सक्छ, त्यसैले यो राम्रो छ कि तिनीहरूलाई सानो बनाउनुहोस्।
यो मीठापन एक बच्चाको पार्टीमा एक मिठो टेबलको लागि उपयुक्त छ, किनकि यो केवल स्वादिष्ट छैन तर अत्यन्त पोषक हुन्छ। एकै समयमा, प्यारा कुकी सॉसेज चाँडै तयार छ र विशेष पाक कलाको आवश्यकता पर्दैन। ससोस को माथि मा स्ट्रिप को क्यान्ड्स दूध, पुरा या कटा पागल संग सजाया जा सकता है। कटा हुआ बटुआको सट्टा, तपाईं लगभग कुनै पनि अन्य प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ (बादाम बाहेक, किनकि यो केहि थोरै कडा हुन सक्छ)। तपाईं मिठाईको स्वादको साथ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, यसमा फलफूल फल वा ताजा जामुन, जुजुबू र धेरै थप।
कुन एक शिकारीको लागि केक बनाउन सक्छ
उकिुक - यो के हो? गुणहरू, लाभहरू र हानिकारकहरू
कान lobe मा बल: कसरी जीत atheroma
रूसी राष्ट्रिय हकी Sergey Lomanov को खेलाडी
1337 - त्यो के हो?
इन्जिन 402 मा विचार गर्नुहोस्
कर्पोरेट नैतिकता के हो?
रूसी मिडफिल्डर इगोर Kireev
उच्चतम बुद्धि - आंकडा प्रतिभा